superm-concert-faqs | Prudential Myanmar
PrudentialxSuperM ရဲ့ We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲ
အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲ၊ ပရိတ်သတ်တွေ့ဆုံပွဲနှင့် အမေး၊ အဖြေ ကဏ္ဍအတွက် အသေးစိတ် အချက်အလက်များမှာ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပြီး ပရူဒန်ရှယ်အာမခံသည် PrudentialxSuperM We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနှင့် ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲနှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ် အချက်အလက်အားလုံးကို ပြောင်းလဲ၊ ပြင်ဆင်၊ တည်းဖြတ်၊ ဖြည့်စွက်ခွင့် ရှိပါသည်။
1. ဖျော်ဖြေပွဲ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ
ပွဲကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၇) ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ် (ကိုရီးယားစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီ) မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာပါ။
2. We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပချိန် ဘယ်နှစ်မိနစ် ရှိမလဲ?
ပွဲအစအဆုံး မိနစ် (၆၀) ကနေ (၉၀) ခန့် ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
3. We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို ဘယ်သူတွေ ကြည့်လို့ရလဲ?
We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲက SuperM ပရိသတ်တွေအတွက် ပရူဒန်ရှယ်အာမခံက ကျင်းပပေးတဲ့ သီးသန့်ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ပရိသတ်တွေပဲ ဒီဖျော်ဖြေပွဲကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
4. We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို ကြည့်ဖို့ ပိုက်ဆံပေးရမှာလား?
မလိုပါဘူး။ We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို ကြည့်ဖို့ ငွေကြေး ကောက်ခံတာ၊ ငွေပေးသွင်းရတာ မရှိပါဘူး
5. We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲမှာ SuperM က ဘာသီချင်းတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေမှာလဲ? သီချင်းတောင်းဆို လို့ရော ရပါသလား?
We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဘယ်သီချင်းတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေမလဲဆိုတာကို အရမ်းသိချင်နေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးကို အံ့သြဝမ်းသာသွားအောင် ဘာအစီအစဉ်တွေရှိလဲဆိုတာ မပြောတော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ အသိပေးချင်တာကတော့ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ပွဲမတိုင်ခင်နဲ့ ပွဲကျင်းပနေချိန်အတွင်းမှာ သီချင်းတောင်းဆိုခွင့်ရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီပွဲမှာ ဖျော်ဖြေဖို့ SuperM က မြူးကြွတဲ့ သီချင်းအမိုက်စားတွေ စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ စိတ်ချလိုက်ပါ။
6. We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲမှာ Baekhyun နဲ့ Taemin ရော လာဖို့ အစီအစဉ်ရှိလား?
Baekhyun နဲ့ Taemin က စစ်မှုထမ်းနေတာကြောင့် စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ပွဲကို လာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
7. ပွဲမှာ SuperM အဖွဲ့အပြင် အခြား K-POP ဧည့်သည်အဆိုတော်တွေရော လာဖို့ရှိလား?
ဒီအချက်အလက်တွေကို ပွဲမတိုင်ခင် ထုတ်ပြောလို့မရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ပဲ ပြောပါရစေ။
8. We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို ဘယ်ဘာသာစကားနဲ့ ကျင်းပမှာလဲ?
ဖျော်ဖြေပွဲကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ SuperM အဖွဲ့ကတော့ ကိုရီးယား၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
9. We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲမှာ ပွဲအမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလား?
ပွဲအတွက် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ပေးအပ်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိတဲ့အကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ အသိပေးလိုပါတယ်။
10. We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို ဘယ်ကနေ ထုတ်လွှင့်မှာလဲ? ဒါမှမဟုတ် ဘယ်ပလက်ဖောင်းကနေ ကြည့်လို့ရမလဲ?
11. We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို ဘယ်လို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရနိုင်မလဲ?
ရွေးချယ်ခံရတဲ့အနိုင်ရရှိသူတွေဟာ We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို ကြည့်ရှုဖို့ အတွက် သီးသန့် လင့်ခ်တစ်ခု၊ ကုဒ်တစ်ခုနှင့်အတူ အခြား ညွှန်ကြားချက်တွေ ပါရှိတဲ့ အီးမေးလ်တစ်စောင်ကို လက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ခံရတဲ့အနိုင်ရရှိသူတွေအနေနဲ့ လက်ခံရရှိထားတဲ့ လင့်ခ်နဲ့ကုဒ်ကို တခြားဘယ်သူကိုမှ မျှဝေမပေးဖို့ အထူး မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ ဒီလို မျှဝေလိုက်မယ်ဆိုရင် We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲ တက်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ကို ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။
12. တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် ပလက်ဖောင်းကို ဘယ်ကနေတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လို့ရနိုင်မလဲ? (ကွန်ပျုတာ, လက်တော့ပ် အစရှိသဖြင့်)
မိုဘိုင်းဖုန်း၊ လက်တော့ပ်၊ ကွန်ပျုတာ/desktop ၊ iPad နဲ့ tablet တွေမှာပါရှိတဲ့ Chrome ၊ Firefox ၊ Safari နဲ့ Edge အစရှိတဲ့ browser တွေကနေတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Internet Explorer (IE) ကတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
13. ဒီနိုင်ငံမှာရော တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် ပလက်ဖောင်းကို ဝင်လို့ရနိုင်ပါသလား?
တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် ပလက်ဖောင်းကို ကမ္ဘာ့နေရာ အနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့ ဘယ်နိုင်ငံကမဆို ဝင်လို့ရပါတယ်။
14. မြန်မာနိုင်ငံ မှာ နေတဲ့သူဆိုပေမဲ့ လက်ရှိ တခြားနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီ့ကနေ We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ ရနိုင်ပါသေးသလား?
ရနိုင်ပါတယ်။ သင်က မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ အနိုင်ရရှိသူတွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ် We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
15. We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို ဘယ် device တွေကနေ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုလို့ ရနိုင်ပါသလဲ?
မိုဘိုင်းဖုန်း၊ လက်တော့ပ်၊ ကွန်ပျူတာ /desktop ၊ iPad နဲ့ tablet အစရှိတဲ့ device တွေကနေ We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
16. We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုတဲ့ device တွေမှာ အကောင့်တစ်ခုတည်း သုံးပြီး တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ ရနိုင်ပါသလား?
ရွေးချယ်ခံရတဲ့အနိုင်ရရှိသူတွေဟာ device တစ်ခုတည်းကနေပဲ ကြည့်ရှုလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အကောင့်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို အခြားသူတွေနဲ့ မျှဝေတာမျိုး မလုပ်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
17. We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို ကြည့်ရှုဖို့ အင်တာနက် အမြန်နှုန်း အနည်းဆုံး ဘယ်လောက် လိုအပ်ပါသလဲ?
ဟုတ်ကဲ့။ အထစ်အငေါ့ မရှိဘဲ ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဆိုရင် အင်တာနက် အမြန်နှုန်း တစ်စက္ကန့်မှာ အနည်းဆုံး 5MB ရှိရပါမယ်။
18. တိုက်ရိုက်လွှင့်ပေးနေတဲ့ လင့်ခ် (ဒါမှမဟုတ်) သီးသန့်ကုဒ်ကို သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ မျှဝေပြီး (ဒါမှမဟုတ်) ကိုယ်စား ကြည့်ရှုလို့ရနိုင်လား?
အဲ့ဒီလိုမျိုး လုပ်လို့ မရတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲက ရွေးချယ်ခံရတဲ့အနိုင်ရရှိသူတွေအတွက် သီးသန့်စီစဉ်ထားတဲ့ ပွဲအစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲ တက်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ကို ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အတွက် တိုက်ရိုက်လွှင့်ပေးနေတဲ့ လင့်ခ် ဒါမှမဟုတ် သီးသန့်ကုဒ်ကို အခြားသူတစ်ဦးနဲ့ မျှဝေတာ ဒါမှဟုတ် ကိုယ်စားကြည့်ခွင့်ပေးတာမျိုးတွေ မလုပ်ဖို့ အထူးမေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ အနိုင်ရရှိသူတွေဟာ device တစ်ခုတည်းကနေပဲ ကြည့်ရှုလို့ရမှာပါ။ ပွဲကြည့်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိရှိလိုတယ်ဆိုရင် “We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို ဘယ်သူတွေ ကြည့်လို့ရလဲ?” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအောက်က ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်း လိုက်နာပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
19.တိုက်ရိုက်လွှင့်ပေးနေတဲ့ လင့်ခ်က အလုပ်မလုပ်တော့ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
ဒီအတွက် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး လင့်ခ်ကို refresh လုပ်ကြည့်ပါ (ဒါမှမဟုတ်) device ကို restart ချကြည့်ပါ (ဒါမှမဟုတ်) network settings ကို တစ်ချက် ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
20. တိုက်ရိုက်လွှင့်ပေးနေတဲ့ လင့်ခ်က မှုန်ဝါးပြီး ထစ်ငေါ့နေရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
စိတ်မပူပါနဲ့။ ကူညီပေးပါ့မယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး လင့်ခ်ကို refresh လုပ်ကြည့်ပါ (ဒါမှမဟုတ်) device ကို restart ချကြည့်ပါ (ဒါမှမဟုတ်) network settings ကို တစ်ချက် ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
21. တကယ်လို့ ထုတ်လွှင့်တဲ့/တိုက်ရိုက်ပြသတဲ့ ဗီဒီယိုက ကျွန်တော်/မ ဆီမှာ အရုပ်နဲ့ အသံနဲ့ မကိုက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒီပြဿနာကို ကူညီဖြေရှင်းပေးပါ့မယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး လင့်ခ်ကို refresh လုပ်ကြည့်ပါ (ဒါမှမဟုတ်) device ကို restart ချကြည့်ပါ (ဒါမှမဟုတ်) network settings ကို တစ်ချက် ပြန်စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ ပြဿနာ ထပ်ပေါ်လာရင် help@bbangyanetworks.com ကို ဆက်သွယ်အကူအညီ တောင်းဖို့ အကြုံပြုလိုပါတယ်။
22. ကျွန်တော်/မ ရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲက ပုံတွေကို တင်လို့ရလား?
အခုလို ဖြေရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲက ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ရိုက်ကူးပြီး ကိုယ်ပိုင် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာ ဒါမှမဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်အကောင့်တွေမှာ တင်ခွင့်မရှိပါဘူး။
23. We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲအတွင်း ဒါမှမဟုတ် ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူးထားတာကို ကျွန်တော်/မရဲ့ YouTube ချန်နယ်၊ အခြား ဒစ်ဂျစ်တယ် ဒါမှမဟုတ် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွေမှာ တင်လို့ရနိုင်မလား? တင်မယ်ဆိုရင် အရေးယူ အပြစ်ပေးမှုတွေ ခံရနိုင်လား?
စိတ်မကောင်းပါဘူး။ We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးပြီး ပွဲအတွင်းမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ပွဲပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဒါမှမဟုတ် အခြား ပလက်ဖောင်းတွေမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသတာ၊ ထုတ်ဝေတာမျိုးတွေ ပြုလုပ်ဖို့ ခွင့်မပြုထားပါဘူး။ စည်းကမ်းချက်တွေ ချိုးဖောက်ထားတာ ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးဖို့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းတွေကို အဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်လို့ ချိုးဖောက်တာမျိုး တွေ့ရင် We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲ တက်ရောက်ခွင့် ရုပ်သိမ်းခံရတဲ့အပြင် ဒဏ်ကြေးငွေပေးဆောင်ရတာ ဒါမှမဟုတ် အပြစ်ပေး အရေးယူခံရတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သတိပြုစေလိုပါတယ်။
24. ကျွန်တော်/မ သူငယ်ချင်းတချို့က ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲ တက်ရောက်ဖို့ ရွေးချယ်ခံရတယ်ဆိုပြီး အကြောင်းကြားတဲ့ အီးမေးလ်ရကြပေမယ့် ကျွန်တော်/မ က မရပါဘူး။ SuperM ကို အရမ်းကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီပွဲကို တကယ်တက်ရောက်ချင်တာကြောင့် ပရိတ်သတ် တွေ့ဆုံပွဲတက်ရောက်လို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
ခုလိုကြားရတာ တကယ်စိတ်မကောင်းပေမယ့် ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို ရွေးချယ်ခံရတဲ့သူတွေပဲ တက်ရောက်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ပွဲတက်ရောက်ဖို့ အကြောင်းကြားတဲ့ အီးမေးလ် မရရှိဘူးဆိုရင်တော့ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ အနိုင်ရသူစာရင်းမှာ မပါဝင်လို့ဆိုတာ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ အသိပေးပါရစေ။
25. We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲတက်ရောက်ဖို့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ ပါဝင်တဲ့အကြောင်းကြားစာ အီးမေးလ် ရရှိပေမဲ့ ပွဲတက်ရောက်ဖို့ မေ့သွားလို့ မတက်ဖြစ်လိုက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? ဒီပွဲနဲ့တူတဲ့ အခြားပွဲလက်မှတ် အစားထိုး ပြန်ရနိုင်မလား?
စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အစားထိုးလက်မှတ် ပြန်မရနိုင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ပွဲစဉ် တစ်ခုတည်းပဲရှိတဲ့အပြင် ဒီပွဲနဲ့ တူတဲ့ပွဲ ဒါမှမဟုတ် ပွဲအသစ် စီစဉ်မှုတွေ ရှိမှာမဟုတ်တာကြောင့် မမေ့မလျော့ တက်ရောက်စေချင်ပါတယ်။
26. We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲ ဖျက်သိမ်း ဒါမှဟုတ် အချိန်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုး ဖြစ်လာရင် ဘာဖြစ်နိုင်လဲ?
ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်တဲ့ အကြောင်းကိစ္စရပ်တွေကြောင့် We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲ ဖျက်သိမ်း ဒါမှမဟုတ် အချိန်ပြောင်းရွှေ့တာမျိုး ဖြစ်လာခဲ့ရင် ပြောင်းသွားတဲ့ အချိန်နဲ့ နေ့စွဲကို ပြန်လည် အကြောင်းကြားပေးသွားမှာပါ။
1. We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ ပရိသတ်တွေ့ဆုံပွဲကို ကျင်းပပြီးတဲ့နောက် ပြန်ကြည့်လို့ရလား? ပြန်ကြည့်လို့ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်မှာပြန်ကြည့်ရမလဲ?
စိတ်မကောင်းပေမဲ့ We DO အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ ပရိသတ် တွေ့ဆုံပွဲက တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်တာကြောင့် ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုး မရနိုင်ပါဘူး။
2. လူမှုကွန်ရက်တွေမှာတင်ဖို့ ကျွန်တော်/မရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ့ဆုံပွဲ အပိုင်းလေးကို ရိုက်ကူးထားလို့ ရမလား?
ဒီလို လုပ်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းမယ်ဆိုပေမဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ့ဆုံပွဲ ရိုက်ကူးဖမ်းယူထားတဲ့ ဘယ်အပိုင်းကိုမှ ပေးလို့မရနိုင်လို့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။